Nicole, nke iri na anọ nke ebe okpomọkụ na-etolite na Atlantic | Netwọk Mgbasa Ozi
Nicole, nke iri na anọ nke ebe okpomọkụ na-etolite na Atlantic
Foto - Wunderground.com
Ọ dị ka ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ agaghị enye nsogbu. Ajọ Ifufe Matthew ka na-arụ ọrụ, na ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ malitere ụnyaahụ Nicole, n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Puerto Rico. Ọ na-aga ugwu ọdịda anyanwụ, ọ nweghịkwa iyi egwu ọ bụla n'oge a, a na-atụ anya na ọnọdụ ahụ ga-aga n'ihu n'ụzọ ahụ.
Oke ikuku ikuku edere edere ruru 85km / h, ma mee njem 13km / h.
Oké ifufe a dị ihe dịka kilomita 840 site n'isi obodo Puerto Rico, San Juan. Ndị ọkachamara kwenyere na nke ahụ agaghị enwe ọtụtụ mgbanwe ike ụbọchị abụọ na-abịa, ebe ọ bụ na ifufe nke Ajọ Ifufe nke Matthew nwere ike igbochi nke ahụ ime, dị ka akọwara na ngbasa ozi si Ala mmiri.
Mgbe oge ahụ gasịrị, Nicole ga-aghọ obi ịda mba nke ebe okpomọkụ, ya bụ, ka a na-ekwu okwu, ajọ ifufe mepụtara na mmiri nke ebe okpomọkụ, nke nwere usoro a haziri ahazi nke na-agbagide na-abụghị akụkụ nke agịga elekere. Njirimara ya bụ ndị a:
Ọsọ ikuku: 0 ka 62km / awa.
Nsogbu etiti: erughị 980 mbar.
O nwere ike ibute nnukwu mbibi na ide mmiri, mana atụghị anya na Nicole ga-akụ ebe ndị mmadụ bi.
Ya mere, n'oge ajọ ifufe a na Atlantic, oké mmiri ozuzo iri na anọ amalitelarị, nke n'ime ha ise abụwo ifufe (Alex, Earl, onye kpatara oke mbibi na Mexico, Gastón, Hermine na Matthew). Nchịkwa National Ocean na mbara ikuku (NOAA) buru amụma banyere nguzobe nke oké ifufe 16, site na June 1 ruo November 30 nke afọ a. Ọ bụ ezie na ị ga-amụrụ anya mgbe niile, ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ, ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ na-etolite n’oge, dịka anyị nwere ike nyochaa na Jenụwarị site na nhazi Alex, nke hibere na Jenụwarị 14, na-aghọ nke akaghi aka kemgbe 1938 .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Nicole, nke iri na anọ nke ebe okpomọkụ na-etolite na Atlantic